Muxuu Xirsi Ka Yidhi Xilkiisa Hogaami-yaha WADDANI Iyo Xilka Guddoomiye Ee Cabdiqaadir Jirde, Mustaqbalka JSL Iyo Baddalka Uu U Hayo Taageerayashii Ku Bohoobay Is-bahaysigii Jeegaanta KULMIYE | FooreNews
Home wararka Muxuu Xirsi Ka Yidhi Xilkiisa Hogaami-yaha WADDANI Iyo Xilka Guddoomiye Ee Cabdiqaadir Jirde, Mustaqbalka JSL Iyo Baddalka Uu U Hayo Taageerayashii Ku Bohoobay Is-bahaysigii Jeegaanta KULMIYE
Muxuu Xirsi Ka Yidhi Xilkiisa Hogaami-yaha WADDANI Iyo Xilka Guddoomiye Ee Cabdiqaadir Jirde, Mustaqbalka JSL Iyo Baddalka Uu U Hayo Taageerayashii Ku Bohoobay Is-bahaysigii Jeegaanta KULMIYE
FoorenewsOct 17, 2016wararka0
“Kartida Iyo Tamarta Dhallinyaranimo Ee Nagu Jirta Iyo Khibradda Xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde Ayaanu Meel Ku Gaadhi Doonaa…..” Hogaamiye Xirsi
Hargeysa (Foore)- Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa bah-weynta xisbigaasi ugu bushaareeyey in xilkiisa iyo xilka Guddoomiyenimo ee la filayo in uu dhawaan si rasmi ah ula wareego Xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde aanay ahayn kuwo si diiddan ama wax laga dhex samayn karo oo ay isaga iyo xildhibaan Jirde yihiin laba gacmood oo usha meel u wada haya, kalsooni ay isku qabaana ay ugu wada shaqayn doonaan xisbiga isaga oo dhinaca kale sheegay in ay dadaalkooda oo dhan isugu gayn lahaayeen sidii loo xaqiijin lahaa himilada xisbiga WADDANI oo ah in dalkan halka uu maanta joogo laga sii qaado oo hir doog leh loo sahamiyo.
Hogaamiye Xirsi waxa uu sheegay in uu hambalyeynayo Guddoomiyenimada uu dhawaan qaban doono Guddoomiye Cabdiqaadir Jirde khibraddiisa iyo aqoontiisuna wax weyn tari doonto qaranka iyo gaar ahaan xisbiga isaga oo Mudane Xirsi ku kaftamay in labada xi lee Hogaamiyaha iyo Guddoomiyaha xisbigu isugu mid yihiin oo aanay jirin dacaayadaha dadka qaar meelahaa ka wadaan.
Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa shalay ka jeediyey taageerada Beesha Gobolka Hawd iyo Hargeysa oo ay kumannaan qof oo deegaamadaasi ka soo jeedaa ku soo biiraan xisbiga WADDANI kuna soo dhaweeyeen Xildhibaan Cabdiqaadir jirde oo la wareegi doona Guddoomiyenimada xisbiga.
Khudbaddii Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan uu shalay madashaasi ka jeediyey waxa uu ku yidhi sidan: “Waxaan Hambalyaynayaa Guddoomiyaha Cusub ee WADDANI ee Mustaqbalka Dhaw Mudane Xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde, saaxiibkay iyo walaalkay oo aan ku hubo in aan isku kaashan doono gacmaha isku qabsan doono, si xisbigani u gaadho guul, una gaadhsiiyo qaranka Somaliland guul. Guul aynu ugu tallaabsano bash bash iyo barwaaqo. Dadkeenu ay in badan ku naalloonayeen. Waxaan rajaynayaa Insha Allaahu tacaala in aynu guushaasi u wada guntanno, waxaanan ballan qaadayaa in aannu Cabdiqaadir gacmaha is qabsan doono. Hareeraha ka gali doono Musharraxa Madaxweyne ee Mustaqbalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) oo aannu hareeraha ka gali doono Ilaahayn SWT nagu kaalmayn doono. Ilaahayn ha innagu guuleeyo in uu qarankan hogaamiyo”.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay sida qiimah badan ee Guddoomiyaha xisbigu u hannaaniyey ee uu u qorsheeyey qaar suurti galiyey in maamul iyo hogaan hufan oo is kaashada ay ka muuqato muraayaddii ay ka muuqato Bulshadu oo ay iska arkaan waana tii aan maalintii dhawayd ugu yeedhayay in aynu jeegaantii ku baddali doono giraan isku taalla oo qaranka Somaliland ka wada kooban yahay. Waxa gaadhsiin doona Insha Allaahu xisbiga WADDANI. Inta xisbiga WADDANI u soo halgantay ee ku soo dadaalay dhismihiisa ururnimadii, waxaan leeyahay xisbigu maanta wuu ballaadhan yahay in badan oo kalena wuu qaadayaa illaa aynu giraanta isku xidhno oo qarankeenu noqdo, giraan isku xidhan oo dalka wada gaadhsiisa oo ku wada kalsoon oo is haysata oo insha allaahu awood leh oo aan jabaynin”.
“Waxaan xisbigayga WADDANI ugu bushaaraynayaa in ay dadka reer Somaliland qaabilaad wanaagsan ku qaabileen Annaga oo ahayn shalay kuwii u halgamayay KULMIYE in aannu ku qanacnay oo qaadanay oo idinkula midawnay oo idinkula bahawnay dadaalka aad samayseen oo ay guushii nooga bidhaantay. Guusha aan rabno in aan gaadhno waxaa loo baahan yahay halgankeedii. Isku duubnideedii”
“Aan Kaftamee, Xaafaddani waa xaafaddaydiiye oo aanan ku qaloonayn, waxaan maqlayay dadka qaar yidhi waar Hogaamiyihii iyo Guddoomiyihii maxay kala yihiin tolow?, waxaan leeyahay, waa laba walaalo ah oo mataano ah oo is kaashanaya. Cabdiraxmaan Cirro waxa uu xigmad ku hannaaniyey in uu isu geeyo, dhallinyaranimada oo leh firfircooni iyo tamar, waayeelnimaduna waxa ay leedahay xikmad, xikmadda iyo tamarta oo la isu geeyo ayaa guusha lagu gaadhaa. Iyada oo Tamarta badan ee ii kadysan iyo khibradda badan ee Cabdiqaadir Jirde aanu garbaha isku qabsan doonaa balse waxaan ku kaftamayaa qolyaha yara shakiyey ee yidhi waar Hogaamiyahani tolow miyuu naga qaadayaa meeshii, waxaan idin leeyahay hadduu yara qurux bato ma idiin baddalaa?, Aniguba waan ogolahaye, mid walba waan ogolahee kan kaleba ma qaataa?, oo hogaamiyaha Cabdiqaadir Jirde ma u dhiibnaa, waxaan leeyahay waar aniga iyo Cabdiqaadir usha meel baanu ka wada qaban doonaa oo waxaanu nahay rag meel u wada jeeda oo isku mid ah. Waxa la yidhaahdaa shimbirtu waxa ay laanta jilicda san isugu taagtaa, ma aha awood darradeedam, ma aha miisaan yarideeda, waa kalsoonideeda ay baalasheeda ku qabto. Waa aannu iskula qaadanay aniga iyo Cabdiqaadir kalsoonida aannu isku qabno iyo kalsoonida aannu xisbigayaga ku qabno. Waxannu ku kalsoonahay dadkayaga, waxaannu ku kalsoonahay xisbigayaga, waxaannu ku kalsoonahay nafahayaga, waxaanan idinku hogaamin doonaa annaga oo isku dayi doona in aannu musharraxeena halka aynu la doonayno kula dagaalanno oo dadaal u galno. Halkuu shalay KULMIYE dhigay ayaynu ka qaadaynaa, meel ka fog baynu gaadhsiinaynaa haddii Alle ka dhigo. Waana waxa aynu xisbiga u ballaadhinay. Madaxweynaha joogaa wax badan buu qabtay waannu shalay la shaqaynay, halkaa uu dhigayna waan ka qaadaynaa. Walaalayaal aan qabiilka iska dayno oo aan qarannimo ku dagaalanno, beel, laba iyo saddex toona qaran ma noqdaan ee dhammaanteen aan qaranimo u guntanno innaga oo wixii aynaan ka maarmayn ee qabiil ah wanaagga u adeegsanayna” ayuu khudbaddiisa ku soo gunaanaday Siyaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan.
Previous Post“Waxbarashadeena & Caafimeedkannaba Waa La Caawiyaa Iyada Oo Aynu Sannadkii Qaadka Ku Bixinno $480 Milyan”..Guddoomiye Muuse Biixi Next PostMaxamed Biixi Yoonis Oo Shalay Shir Duceed Jufadiisa Hoose Kula Yeeshay Huteel Xaraf Hargeysa Iyo War Bixin Kooban Oo Uu Ka Siiyay Sababta Uu Waddani Ugu Biiray